MORONDAVA : Mpangalatra niharan’ny fitsaram-bahoaka, maty voatapa-doha
Mpangalatra iray no maty niharan’ny fitsaram-bahoaka, tao amin’ny Fokontany sy Kaominina Bemanonga, Distrikan’i Morondava, Faritra Menabe, ny faran’ny herinandro lasa teo. Maty voatapa-doha io mpangalatra io. 5 janvier 2017
Araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana dia avy nanafika tao amin’io Fokontany io, ity lehilahy ity niaraka tamin’ny namany telo. Tafatsoaka niaraka tamin’ny entana nangalariny ny roa tamin’ireo, fa ilay lehilahy iray no tratran’ny fokonolona ary niharan’ny fitsaram- bahoaka.
Tsy vitan’izay, fa notapahana ihany koa ny lohany. Araka ny fantatra dia manjaka ary mahazo vahana ao amin’io Distrika io ny asan-jiolahy sy ny fangalarana omby. Saika isan’andro no andrenesana izany. Tsy ao amin‘io Distrika io ihany fa saika manerana ny Kaominina ao amin’io Faritra io. Efa nisy ny ezaka nataon’ny nataon’ny mpitandro ny filaminana mikasika izay tsy fandriapahalemana ao amin’ny faritra izay.